मनकारी रोहित चन्द ! घा’ईते फुटबलरको उप’चारको लागि गरे आर्थिक सहयोग ! – Yuwa Aawaj
जेठ २१, २०७८ शुक्रबार 588
काठमाडौं : केहिदिन अगाडि हामी पौडी खेल्ने क्रमटाउको ढुंगामा ठोकिँदा घा”इते भएका फुटबलर मोहन तरामु मगरको उ;प’चारमा आर्थिक अभा’व भएको खबर प्रकाशित गरेका थियौ ।
मोहनको ग्रान्डी अस्पतालमा उ;प;चार भइरहेपनि । आर्थिक अवस्था क;म;जोर भएकाले उनको श;ल्यक्रि;या हुन सकेको छैन । यसैबिच राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी रोहित चन्दले मोहन तरामुको उ;प;चार;को लागि १५ हजार आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
रोहितका भाई रबिन्द्र चन्दले मोहनको परिवारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएका हुन् । रोहित अहिले नेपाली टोलीसँग बिश्वकप छनोट खेल्न कुबेतमा छन् । यसअधि नेपाल सुपर लिगले समेत मोहनको उप’चारको लागि १ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो ।
मोहनको उपचारमा सहयोग गर्न फुटबल समर्थकहरुले आर्थिक संकलन अभियान थालेका छन् । सत्यवति गाउँपालिका – ३, ठु’लोलुम्पेक स्थायी घर भई लामो समयदेखि तम्घासमा बस्दै
आएका २६ बर्षीय तरामको शुक्रबार खोलामा पौडि’ने क्रममा टाउको ढु;ङ्गा;मा ठो;किए;र टा;उकोमा ग;म्भी;र चो;;ट लागेको बताइएको छ । उनको अहिले छातीदेखि तलको भा;ग नचलेर अचेत जस्तै छन् । मोहनले गत सिजन रानीपोखी कर्नर टिम (आरसिटी) बाट बी डिभिजन खेलेका थिए ।
उनले श्री कुमारीबाट पनि बी डिभिजन लिग खेलेका छन्। मोहनको उप’चारमा सहयोग गर्न चाहनेहरुले सागर थापको नाममा एनएमबी बैंकमा रहेको खाता नं।०१७००५९९२१६०००११ मा रकम जम्मा गर्न सक्ने छन् । यस्तै, इसेवा आइडी ९८६७३२९७०९मा पनि रकम जम्मा गर्न सकिने छ।
Prevवनमन्त्री आले ‘आउट’, एकबाल मिया ‘इन’ !
Nextकस्ता व्यक्तिहरुले खानु हुँदैन कागती पानी ? थाहा पाउनैपर्ने यी ५ कुराहरु ।
७ मन्त्रीहरूलाई रोडमा ल्याउने २५ वर्षीय बिराज भन्छन – संविधानमा फ-र्ड भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन ।(भिडियो सहित)